Ireo mponina ao amin'ny fanjakana 12 amerikana izao dia navela hitsidika an'i Costa Rica
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Costa Rica » Ireo mponina ao amin'ny fanjakana 12 amerikana izao dia navela hitsidika an'i Costa Rica
Fanjakana amerikana vaovao enina, ho an'ny totalin'ny 12, no nampiana ao amin'ny lisitry ny faritany izay avela hiditra ny mponina ao aminy Costa Rica amin'ny rivotra.
Hatramin'ny 1 sept., Ankoatry ny mponin'i New York, New Jersey, New Hampshire, Vermont, Maine ary Connecticut (nambara herinandro lasa izay), ireo izay mipetraka ao Maryland, Virginia, ary ny Distrikan'i Columbia dia havela hiditra . Roa herinandro aty aoriana, amin'ny 15 septambra, ireo mponina any Pennsylvania, Massachusetts ary Colorado dia avela hiditra ihany koa.
"Ny fidiran'ny mpitsangatsangana avy amin'ireo fanjakana 12 ireo dia avela satria manana areti-mifindra epidemiolojika ankehitriny na ambaratonga ambany kokoa amin'ny areti-mifindra any Costa Rica izy ireo," hoy ny fanazavan'ny minisitry ny fizahantany Gustavo J. Segura nandritra ny fanambarana natao ny alakamisy teo nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety Trano filoham-pirenena.
Ankoatr'izay, nanambara ny minisitry ny fizahan-tany fa ankoatry ny fahazoan-dàlana hamily fiarakodia, ny famantarana ny fanjakana (State ID), dia avela koa ho porofom-ponenana amin'ireo fanjakana nahazo alalana ireo. Ity fepetra ity dia manilika ireo zaza tsy ampy taona mandeha miaraka amin'ny fianakaviany.
Nanampy i Segura fa ny mpizahatany avy amin'ny fanjakana nahazo alalana dia afaka miditra ao amin'ny firenena, na dia mijanona amin'ny toerana tsy nahazoana alalana aza izy ireo, raha mbola tsy miala amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo. Ohatra, ny mpizahatany iray izay miala amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Newark Liberty any New Jersey ary mijanona any Panama dia avela hiditra any Costa Rica.
Fepetra iray hafa nambara tamin'ity alakamisy ity fa ny valin'ny fitsapana PCR dia azo alaina ao anatin'ny 72 ora (fa tsy 48) ny dia mankany Costa Rica. Mihatra amin'ny firenena rehetra nahazo alalana hiditra an'i Costa Rica izany.
Nanamafy i Segura fa raha hanombohana ny famerenany ny asany dia hitohy ho tompon'andraikitra, hitandrina ary hiadana ny fisokafan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena ary hiara-hiasa amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany eo an-toerana.
“Naveriko ihany ny antso ho an'ny andraikitra iraisana hiarovana ny fahasalaman'ny olona, ​​miaraka amin'izay koa ireo asa antenainay haverina. Raha samy manaraka ny fomba amam-panao protokol isika rehetra dia haharitra mandritra ny fotoana maharitra ny fepetra », hoy ny minisitry ny fizahan-tany.
Ho an'ireo olona monina any amin'ny fanjakana amerikana voalaza etsy ambony, fepetra efatra no ilaina hidirana any Costa Rica:
1. Fenoy ny endrika nomerika momba ny epidemiolojika antsoina hoe FAHASALAMANA.
2. Ataovy ny fitsapana PCR ary mahazoa valiny ratsy; ny fitsapana dia tsy maintsy atao 72 ora farafahakeliny alohan'ny sidina mankany Costa Rica.
3. Fiantohana mandeha an-tongotra tsy maintsy alefa izay manaron-trano, raha misy ny karatra quarantine sy ny fitsaboana Covid-19 faharariana. Ny fiantohana voalaza dia azo atao iraisam-pirenena na vidiana amin'ireo mpiantoka Costa Rican.
4. Porofom-ponenana amin'ny fanjakana nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana hamily fiarakodia na kara-panjakana.
Sidina manokana ho an'ny olom-pirenena niainga avy amin'ny toerana tsy nahazoana alalana
Hatramin'ny 1 septambra, ny sidina manokana avy any Etazonia dia avela hiditra ao amin'ny firenena ihany koa, satria manana risika epidemiolojika ambany kokoa noho ny habeny sy ny toetrany izy ireo.
Ho an'ireo izay tonga amin'ny sidina manokana, ireo fepetra takiana efa voalaza dia hihatra ary raha avy amina toerana niaviany tsy nahazoana alalana izy ireo dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Tale jeneralin'ny fifindra-monina sy ny fifindra-monina. Ny antoko liana dia tsy maintsy mandefa antontan-taratasy fangatahana misy ireto manaraka ireto:
• Anaran'ny mpandeha feno
• Firenena sy taona
• Kopia azo zahana amin'ny taratasy biografika ny pasipaoron'ny mpandeha tsirairay
• Daty fahatongavana, seranam-piaramanidina fahatongavana ary niandohan'ny sidina
• Antony stratejika ahazoana ekena (famakafakana famatsiam-bola; fananana any Costa Rica; antony maha-olona; sns.)
Fanokafana an-dranomasina tsikelikely
Ny yachts tsy miankina ihany koa dia afaka miditra amin'ny firenena amin'ny 1 septambra, raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny firenena izay notakiana tamin'ny fanambarana tamin'ny 1 aogositra teo.
Raha tsy mitondra ny fanadinana PCR ratsy fanahy amin'izy ireo ny mpandeha, na raha niainga avy any amin'ny tanàna na firenena tsy nahazo alalana izy ireo, dia hahazo baiko ara-pahasalamana quarantine izay hanesorana ireo andro niaingany an-dranomasina tamin'ny sambo farany voarakitra ao amin'ny vatan'ny yacht.
Izany dia mety hanehoana ny fidiran'ny yacht tsy miankina zato amin'ny taona sisa amin'ny taona marinina: Golfito, Los Sueños, Pez Vela, Banana Bay ary Papagayo.
Hevitra momba ny solika Annabiol CBD - Vidiny & Aiza no hividianana any Frantsa, Belzika?
Etihad Airways dia manatsara ny fampiharana findainy